Amandla anjingelwayo 'ayimfuneko kwaye afanelekileyo'
Urhulumente waseburhulumenteni waseUnited States, igama elithi "amagunya anikeziweyo" lisebenza kulawo magunya asetyenziswa yiCongress abanganikwa ngokucacileyo kuwo ngumGaqo-siseko kodwa kubonwa ukuba "kuyimfuneko nefanelekileyo" ukwenzela ukuphumeza ngokufanelekileyo loo magunya anikwe ngokomgaqo-siseko.
I-Congress ye-US ingadlulisela njani imithetho yokuba uMthetho-siseko wase-US awunikeli ngokukodwa amandla okudlula?
Isiqendu I, iSigaba 8 soMgaqo-siseko unikeza iNgqungquthela isigaba esithile esithile esichazwa ngokuthi "sichazwe" okanye "amandla" achazwe ngokusekelwe kwinkqubo ye-United States yokubambisana - ukwahlula kunye nokwabelana kwamagunya phakathi koorhulumente ophakathi kunye noorhulumente karhulumente.
Kwimbali yomlando yamagunya achaziweyo, xa iCongress yakha iBhanki yokuqala ye-United States ngo-1791, uMongameli uGeorge Washington wabuza uNobhala wezeNondyebo u- Alexander Hamilton ukukhusela isenzo malunga nenkcaso kaThes Jefferson , uJames Madison kunye noMmeli-Jikelele u-Edmund Randolph.
Kwimpikiswano yeklasi yamagunya anikwe amandla, uHamilton wachaza ukuba imisebenzi elawulayo nayiphi na urhulumente ichaza ukuba lo rhulumente unelungelo lokusebenzisa nawaphi na amandla afunekayo ukuze afeze loo misebenzi. UHamilton wagxininisa ngokuthi "inhlalakahle jikelele" kunye nemigqaliselo "eyimfuneko kunye nefanelekileyo" yoMgaqo-siseko yanikezela lo mbhalo ukunyaniseka okufunwa yimigangatho yayo. Ukuqinisekiswa ngxabano likaHamilton, uMongameli wase Washington wasayina ibhilikhi yebhanki ibe ngumthetho.
Ngo-1816, uMgwebi oyiNtloko uJohn Marshall wacacisa ukuphikisa kukaHamilton ngo-1791 ngenxa yamagunya athetha kwiSigqibo seNkundla ePhakamileyo kuMcCulloch v. Maryland exhasa i-bill eyadluliselwa yiCongress ekwakheni iBhanki yesiBini yase-United States.
UMarshall wathi iCongress inelungelo lokuseka ibhanki, njengoko uMgaqo-siseko unikela kwiNgqungquthela ethile yamandla angaphaya kwaleyo ichazwe ngokucacileyo.
Nangona kunjalo, iCongress ithatha amandla ayo aphikisanayo ukuba atshintshe imithetho engabonakaliyo kwiSiqendu I, iCandelo 8, Isiqendu 18, esinika iNgqungquthela amandla, "Ukwenza yonke iMithetho eya kuba yimfuneko kwaye ifanelekile ekuqhubeni ukuLawula amandla angaphambili, kwaye nawo onke Amandla anikwe nguMgaqo-siseko kuRhulumente we-United States, okanye nakuphi na iSebe okanye iGosa lalo. "
Oku kuthiwa "Umnqophiso oyimfuneko kunye neCandelo elifanelekileyo" okanye "Igatya eliPhakamileyo" linika amandla amagunya eNgqungquthela, ngelixa lingahlanjulwanga ngokukodwa kuMgaqo-siseko, kuthathwa ukuba kuyimfuneko ukuphunyezwa kwamagunya angama-27 anikwe kwiCandelo lesi-1.
Imizekelo embalwa yendlela iCongress esebenzise ngayo igunya layo elibanzi elichazwe yiCandelo I, iSigaba 8, Isiqendu 18 siquka:
Imithetho yokuLawula i-Gun: Ngokucacileyo ukusetyenziswa kwayo kwamandla amaninzi, iCongress idlulisele imithetho yokunciphisa ukuthengiswa kunye nokufumana izibhamu ukususela ngowe-1927 . Nangona loo mithetho ibonakala ngathi ihambelana neSihlomelo sesiBini ukuqinisekisa ukuba unelungelo "lokugcina nokuphatha iinqwelo," iCongress iye yaqhubeka ichaza amandla ayo okulawula ukuthengiswa kwamanye amazwe anikezelwe yiCandelo I, Icandelo 8, Isiqendu 3, esibizwa ngokuba "Igatya loRhwebo," njengesizathu sokugweba imithetho yokulawula izibhamu.
Umvuzo omncinci waseburhulumenteni: Omnye umzekeliso weCongress 'usetyenziso lwamandla akhe angabonakali ekuchazeni kwawo okungafaniyo kweCandelo loRhwebi elifanayo ukucacisa ukuhamba kwalo komthetho wokuqala we- Federal Minimum Salary ngo-1938.
IRhafu yeNgeniso: Nangona i-Article I inikezela iCongress amandla athile ahlukeneyo "ukubeka nokuqokelela Imirhumo," iCongress icacise amandla ayo achazwe phantsi kweCandelo leNgxowa-mali ye-Revenue Act ka-1861 ekudaleni umthetho wokuqala werhafu yengeniso.
Ulwabiwo loMkhosi: Ihlala iphikisana, kodwa isisemthethweni esisemthethweni somthetho woluhlu lwezempi senziwa ukuba senze iCongress 'ichaze iCandelo I-magunya' ekuboneleleni ngoKhuseleko oluqhelekileyo kunye neNtlalo yeNhlalakahle yaseUnited States. '
Ukukrazula iPenny: Phantse kuzo zonke iiseshoni zeCongress, abenzi bomthetho baqwalasela i-bill ukuba bawususe ipenny, ngalinye libiza abahlawuli berhafu malunga ne-2 -enti nganye . Ukuba kufuneka i-bill "ye-penny killer" ihambe, iCongress iya kwenza phantsi kweCandelo layo elibanzi I-power I "ukuhlawula imali ..."
Imbali Yamandla Amandla
Ingqiqo yamagunya athile kuMgaqo-siseko awukudala. I-Framers yazi ukuba i-27 ibonise amandla agqitywe kwiCandelo le-1, iSigaba 8 asize sanele ukuba silindele zonke iimeko ezingabonakaliyo kunye nemiba yeNgqungquthela iya kufuneka ikwazi ukujongana neminyaka.
Bacinga ukuba kwinqanaba elijoliswe kuyo njengenxalenye ebalulekileyo kunye ebalulekileyo karhulumente, isebe lomthetho liya kufuna iimandla ezininzi zokubamba umthetho. Ngenxa yoko, i-Framers yakha isigatya "esibalulekileyo kunye esifanelekileyo" kuMgaqo-siseko njengokhuseleko ukuqinisekisa ukuba iNkcazo yokwenza umthetho ngokuqinisekileyo yayiyimfuneko.
Ekubeni ukuzimisela kwezinto kwaye "akuyimfuneko kwaye kulungile" kuthobela ngokupheleleyo, amagunya anikezelwa yiCongress aphikisana nokusukela kwiintsuku zokuqala zikaRhulumente.
Isibhengezo sokuqala sokuvuma ukuba kukho kunye nokuqinisekiswa kwamagunya eNgqungquthela efikelele kwisigqibo esisigxina seNkundla ePhakamileyo ngo-1819.
Kwimeko kaMcCulloch v. Maryland , iNkundla Ephakamileyo yacelwa ukuba ilawulwe ngokusemthethweni kwemithetho ebekwe yiCongress yamisa amabhanki kazwelonke. Kwimbono yeninzi yenkundla, uhlonishwa yiNtloko yezoBulungisa uJohn Marshall uqinisekisile imfundiso "yamagunya anikwe amandla" anike amandla amagunya eNgqungquthela engabonwanga ngokucacileyo kwiSiqendu 1 somGaqo-siseko, kodwa "kuyimfuneko nefanelekileyo" ukwenza loo "manani".
Ngokukodwa, inkundla ifumene ukuba ukususela ekudalweni kweebhanki kwakuxhomekeke ngokufanelekileyo kwiCongress 'amandla akhethiweyo okuqokelela irhafu, ukuboleka imali, nokulawula ukuthengiswa kwamanye amazwe, ibhanki ekubhekiselwe kuyo yayingumgaqo-siseko phantsi kweCandelo "eliyimfuneko kunye nelungileyo." Okanye njengoJohn UMarshall wabhala wathi, "mayeke ukuba iziphelo zivumeleke, makube phantsi kwendawo yomgaqo-siseko, kunye nazo zonke iindlela ezifanelekileyo, ezithatyathwa ngokucacileyo ukuba zingapheli, kodwa zihambelana nencwadi nomoya womgaqo-siseko , ngumgaqo-siseko. "
Kwaye ke, kukho 'umthetho weStalth'
Ukuba ufumana amagunya anikezelweyo yiCongress, ungathanda ukufunda ngokuthiwa "iindleko zeebhanki," indlela esebenza ngokusemgangathweni ngokuqhelekileyo isetyenziswe ngabagwebi ukugqithisa iindleko ezingathandekiyo ezichasene namanye amalungu.
Indlela Yokugwema uMnumzi onguNtshonalanga 15
Ngaba ukubulawa koLwaphulo lokuQala?
Abaguquli kunye nabaguquleli kwiiMbindi kunye neEV (iinqwelo zombane)